Iwo gumi Akanyanya Kufambidzana Zvishandiso zveWebhusaiti Yako CMS - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Iwo gumi Akanyanya Kufambidzana Zvishandiso zveWebhusaiti Yako CMS
Wese muridzi webhizinesi anoita napose pavanogona napo kuti vagadzire kugona kwakasimba munharaunda, kunyangwe iwe uri kuvandudza yavo iripo webhusaiti kana kubata magariro enhau maakaundi.
Kugadziridza webhusaiti kunogona kuve musoro usinganzwisisike kune chero munhu, kunyanya kune varidzi vemabhizinesi madiki vasina dhipatimendi rakazvitsaurira reIT. Nekudaro, kuburitsa maturusi akasiyana siyana ekugadzirisa yako webhusaiti kunoratidza kunobatsira kune rako bhizinesi. Zvishandiso zvekushandisa paWebhu zvinowira muzvikamu zvikuru zvitanhatu:
Kutsvaga injini optimization (SEO)
Chiitiko chevashandisi (UX)
Shanduko mwero optimization (CRO)
Kune akawanda maturu esarudzo kunze uko kubatsira kutyaira rako bhizinesi kumberi uye kuwana yakawanda webhusaiti traffic. Nepo mamwe ari emahara, mamwe anodhura-kana ane akarongeka ekubhadhara zvirongwa zvekukubatsira iwe padivi rezvemari rezvinhu.
Shamwari maturusi anogona kubatsira kudzikisira kumwe kunetseka kunoitika padhipatimendi rekushambadzira. Iyo mari inokosheswa yekuita kuti webhusaiti yako iratidzike kubva kuboka revanhu uye kubatsira bhizinesi rako kuchengetedza makwikwi emakwikwi mumusika wakazara.
Ngatimboongororai gumi eakanakisa shamwari maturusi aunogona kushandisa kuvandudza mashandiro ako uye kubvumira webhusaiti yako kupenya.
Iyo inogadziriswa, yakavhurika-sosi chikuva inonzi WooCommerce chishandiso chakakosha che e-zvokutengeserana mawebhusaiti anotarisa kuti asvike kune yakazara vateereri uye anongedze akakodzera zvikamu. WooCommerce iri WordPress plugin iyo inopa kugona kuvhura online chitoro mumaminetsi mashoma.
Vashandisi vanogona kuwedzera maficha kune yavo webhusaiti, vanogamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara, uye vanowedzera kushanda kwese kwesaiti yavo. Chimwe chinhu chakawedzerwa icho WooCommerce inopa ndechekugadzirisa yako saiti paunenge uchienda neye mobile app.
Mamaneja ewebhusaiti, zvisinei neindasitiri yavari, vanogona kubatsirwa nekushandisa AWS pamwe chete neakaundi yavo yeWordPress. Iyo Amazon Lightsail sevhisi inogona kukutangisa iwe kuvhura WordPress muenzaniso pamutengo unodhura pamwedzi. Heano mamwe e mabhenefiti AWS anopa:
Inokwanisika uye yepamusoro-kuita
Makambani mazhinji anoshandisa AWS yezvinangwa zvekuchengetedza uye nekuvandudza yavo magadzirirwo uye mashandiro. Iyo yakavimbika komputa sevhisi inoenderana neyako bhizinesi zvido. Dzorera mabhenefiti eawo akazara webhusaiti mhinduro uye zvinopihwa.
Imwe WordPress plugin yakakodzera kuongorora kune rako bhizinesi iGoogle Trends. Isu tese tinoziva kuti Google ine simba rakadii, uye zvakafanana zvinogona kutaurwa pamapulagi ayo.
Imwe yemashandisirwo ekutanga eGoogle Trends ndeyekuti kukubatsira nezvako zvemukati kushambadzira zano. Content management masystem (CMS) anogona kuunza matambudziko kumuridzi webhizinesi muridzi, uye hazvisi nyore nguva dzose kuziva zviri kuitika paInternet. Apa ndipo panopinda Google Trends.
Iyo plugin inoshandisa maturusi enjere ebhizinesi kutora ruzivo rwakakosha, swedera kusvika kune yako musika wekutengesa, uye kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi rako. Funga kuita Google Maitiro mune ako mashandiro kuvandudza kugona uye kutyaira rako bhizinesi kumberi.
Hapana muridzi webhizinesi anoda zvinyorwa zvakanyorwa pawebhusaiti yavo. Inopa vatengi chikonzero chekusavimba newe, uye kumisikidza kuvimba kunobatsira kuvapusha kuburikidza nechitoro fanera.
Ndinofara, Copyscape mhinduro inogoneka kugadzirisa zvemukati zvemukati pane webhusaiti yako. Zvese zvaunoda kuti uite kuisa yako zvinyorwa muinjini yekutsvaga, uye ichatsvaga chero zvinyorwa zvakanyorwa pane iyo internet. Iwe unoda kuti bhizinesi rako rimire uye rive rekutanga, uye Copyscape ichakubatsira iwe kuita izvozvo.
Kuti uone kuti vatengi vako vane chiitiko chinonakidza kushanyira webhusaiti yako, funga kushandisa Pingdom kuyedza yako internet kumhanya. Kana webhusaiti inotora yakarebesa kutakura, zvinogona kutungamira mukusiiwa, nekudaro zvinokanganisa mikana yako yekuwana vatengi nyowani nekuchengetedza zviripo.
Zvese zvaunoda kuti uite kuisa yako webhusaiti URL mubha yekutsvaga, uye iwe unowana ruzivo rwakakosha nezve yako saiti kukurumidza kuita. Ipapo, iwe unogona kuita sarudzo dzakadzidziswa nezve mafambiro mberi. Izvo zvinogona kunge zviri kutsvaga zvitsva nzira dzekumhanyisa saiti yako kana kugadzira zvirimo zvine chekuita kuitira kuti vashanyi vako vatarise.
SEMrush isoftware kambani inokupa iwe kugona kutonga yako indasitiri. Iyo online yekuonekwa manejimendi system inouya ine akasiyana maficha izvo zvinokubatsira iwe kukunda yako digital advertising matambudziko.
SEMrush inoputsa maitiro ayo muzvikamu izvi: SEO, zvemukati, kutsvagisa kwemusika, kushambadza, uye SMM neSERM. Icho chiri chose-mu-chimwe, chakazara chishandiso icho chero munhu ane webhusaiti anofanirwa kukwidzirisa kukwidziridza webhusaiti yavo.
Zvinogona kuve zvinonetsa kuti unzwisise ruzivo rwevashanyi vewebhusaiti yako. Iwe ungazive sei kuti ndedzipi nzvimbo dzewebhusaiti yako dzinoda kukwidziridzwa kana kuvandudzwa? NeHotJar, unogona kupinda mundangariro dzevashanyi vewebhusaiti yako.
Tora fungidziro kubva kune ruzivo rwevatengi uye uwane nzira nyowani dzekuchengetedza vashanyi vako kuita. HotJar inopa webhusaiti yekupisa mepu uye maitiro analytics kukutungamira pane yako rwendo rwekugadzira chakanakisa chiitiko.
Simbisa huvepo hwako hwepamhepo uchishandisa Optimizely. Iyo software sebasa (SaaS) kambani uye inotora webhusaiti yako kune inotevera nhanho. Optimizely inogona kukubatsira nekutarisira zvemukati, SEO, uye zvekutengeserana. Chero chero bhizinesi rako raanoda, Optimizely inogona kukubatsira iwe kuwana izvo zvauri kutsvaga.
Makambani makuru senge eBay, Pizza Hut, Dolby, uye New Era vanoshandisa Optimizely mumabasa avo. Chishandiso chakavimbika - saka funga kuchishandisa kune rako bhizinesi.
9. Webhusaiti Grader
Chishandiso chimwe chinowanikwa kumabhizinesi pane ese makambani iri Webhusaiti Grader, chishandiso chepamhepo kubva kuHubSpot. Iwe unonyanya plug muwebhusaiti yako URL, uye unogashira giredhi zvichienderana nekuita kwayo.
Webhusaiti Grader chishandiso chemahara icho chinokuratidza nzira dzinoshanda dzekuvandudza yako webhusaiti. Yakagadzirwa anodarika mamirioni mana mawebhusaiti, uye iyo nhamba iri kungokura chete. Semuenzaniso, iwe unozodzidza kana ako ekushambadzira kuedza achibudirira, kana ako Blog namagwatidziro urikufambisa traffic, uye kana huvepo hwako hwewebhu hwakagadziridzwa kuti uwane mafoni.
10. Nzvimbo Yekuongorora
Kunze kwekunge iwe uri wepamhepo wekushambadzira nyanzvi, kuziva maitiro ekuongorora ese ako SEO zvinhu zvinogona kunetsa. Uchishandisa Site Analyzer inokupa iwe yakajeka mufananidzo yezvinoda kuitwa kukwidziridza yako saiti.
Iyo inopa ruzivo nezve chinzvimbo chekutevera, kukambaira, backlinks uye inokupa iwe zvese zvaunoda kuti uzive zvine chekuita neshoko rekutsvaga uye kuongorora peji. Site Analyzer inopa zvirongwa zvemitengo yebhizinesi rako - paunonyanya kubhadhara, ndipo paunowana maficha.
Uchishandisa zvishandiso zvakanyorwa pamusoro apa zvinokupa mukana wekukwikwidza pamusika. Kunyangwe iwe uri chitoro chidiki chekutengesa kana hombe mubatanidzwa, chishandiso chimwe nechimwe chine chimwe chinhu chekupa kune vashandisi vayo.
Uchishandisa Shamwari Maturu Ekuvandudza Yako Webhusaiti
Ita shuwa kuti iwe uri kuwana zvakanyanya kubva kune yako CMS system uye funga kushandisa mamwe eaya shamwari maturusi. Kugadziridza paWebhu kungaratidzika sekutyisidzira pakutanga, asi zvishandiso izvi zvinoita kuti basa riite nyore uye riite zvakanaka, zvichikupa nguva yakawanda yekutarisa pamufananidzo muhombe.
Iyo inogadziriswa, yakavhurika-sosi chikuva inonzi WooCommerce chishandiso chakakosha kune e-commerce mawebhusaiti anotarisa kusvika kune yakazara vateereri uye kunanga iwo chaiwo zvikamu. WooCommerce iri WordPress plugin iyo inopa kugona kuvhura online chitoro mumaminetsi mashoma.
Imwe yemashandisirwo ekutanga eGoogle Trends ndeyekuti kukubatsira nezvako zvemukati kushambadzira zano. Zvemukati manejimendi masystem (CMS) anogona kuunza matambudziko kune avhareji muridzi webhizinesi, uye hazvisi nyore nguva dzose kuziva zviri kuitika paInternet. Apa ndipo panopinda Google Trends.
SEMrush isoftware kambani inokupa iwe kugona kutonga yako indasitiri. Iyo online yekuonekwa manejimendi system inouya ine akasiyana maficha izvo zvinokubatsira iwe kukunda ako edhijitari ekushambadzira matambudziko.
Chishandiso chimwe chinowanikwa kumabhizimusi pamabhizimusi ese ndeye Webhusaiti Grader, chishandiso chepamhepo kubva kuHubSpot. Iwe unonyanya plug muwebhusaiti yako URL, uye unogashira giredhi zvichienderana nekuita kwayo.
Webhusaiti Grader chishandiso chemahara icho chinokuratidza nzira dzinoshanda dzekuvandudza yako webhusaiti. Yakagadzirwa anodarika mamirioni mana mawebhusaiti, uye iyo nhamba iri kungokura chete. Semuenzaniso, iwe unozodzidza kana ako ekushambadzira kuedza akabudirira, kana ako eblog blog ari kutyaira traffic, uye kana yako webhu kuvapo yakagadziridzwa kune nhare yekuwana.
Kutarisa uye kufunga nezve maitiro ekuvaka webhusaiti pakutanga kunogona kurira kunge rakareruka basa. Nekudaro, zvinonetsa ...
Imwe yeongororo dzichangoburwa pakushandiswa kwetaneti yakawana kuti makumi mashanu muzana evashandisi vanowana ...
Paunonzwa ngano dzevakakurumbira webhu dhizaini, zvinoita sekunge iwe kuti ...